जनकपुरधामको धनुषापथ बाटोमा केही व्यक्तिको घर बचाउन मेयर लालकिशोर लागि परेका छन्ः प्रफुल्लराज घिमिरे, युवा नेता नेपाली कांग्रेस – doodhmati || dudhmati
Home / बातचित / जनकपुरधामको धनुषापथ बाटोमा केही व्यक्तिको घर बचाउन मेयर लालकिशोर लागि परेका छन्ः प्रफुल्लराज घिमिरे, युवा नेता नेपाली कांग्रेस
Sujeet Jha October 29, 2018	बातचित 453 Views
प्र. जानकी मन्दिरदेखि शिव मिष्ठान हुँदै मिल्स एरिया जाने धनुषा पथ बाटोलाई लिएर तपाईहरु आन्दोलन गरिरह्नु भएको छ, समस्या के रहेको छ ?
धनुषा पथ जनकपुरधामको पुरानो बाटोका साथै धनुषाधाम जाने प्रमुख बाटो हुँदा पनि नगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साह गम्भिरता देखाई रह्नु भएको छैन । बाटोलाई सानो पार्ने कार्य भई रहेको छ । दोहोरो मापदण्ड कायम गर्ने प्रयास भएको छ ।
प्र. दोहोरो मापदण्ड के हो त ?
नगरपालिकाले २०५४ सालमा जानकी मन्दिरदेखि जगदेव साहको घरसम्म १० मिटर र जगदेव साहको घरभन्दा उत्तर १३ मिटर निर्धारण गरेको थियो । त्यसको निक्कै आलोचना भएपछि २०७० पुस २६ गते नगर परिषदले दोहोरो मापदण्ड अन्त गरेको थियो । पूरै सडकलाई १३ मिटर कायम गरेको थियो । यस्ता दोहोरो मापदण्ड भएका अन्य सडकलाई पनि हटाइएको थियो ।
प्र. लालकिशोर साह प्रमुख भएपछि किन यो सडकलाई तलमाथि गरिएको छ ?
यो उहाँलाई नै थाहा होला । उहाँका नातागोताका व्यक्तिको जग्गा बचाउन वा के गर्न दोहोरो मापदण्ड ल्याएका छन् त्यो उहाँलाई नै थाहा होला । तर यस्तो मापदण्डका कारण स्थानीयवासी निक्कै असन्तुष्ट देखिएका छन् । ठाउँमा पुगेका व्यक्तिले न्यायिक रुपमा अगाडी बढ्नु पर्छ । पूरै सडकलाई १३ मिटर कायम गर्नु पर्छ । त्यो सडकमा पर्ने जो कोहीको घर परिरहेको छ त्यसलाई बचाउने काम गर्नु हुँदैन ।
प्र. तपाईको पार्टीको नेता बजरंग प्रसाद साह मेयर हुँदा यस प्रकारको मापदण्ड लागु गर्नु भएको थियो ?
बजरंगजी त्यो बेला स्वतन्त्र भएर चुनाव जित्नु भएको थियो । उहाँले लागु गरेको मापदण्डको चारैतिर आलोचना भएको थियो । त्यसै कारण नगरपरिषदले सो मापदण्डलाई खारिज गरेको थियो । तर अन्य सडकलाई त्यतीकै कायम गरिएको छ । जबकि धनुषापथमा लाल किशोरजीको इन्ट्रेस्ट हावी भएको छ ।
प्र.विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लालकिशोर साहसंग मिलेकै हो भनिन्छ नि, आन्दोलनसम्म कांग्रेसले अगाडी बढाउन सकेको छैन ?
नेपाली कांग्रेस लाल किशोरजीसंग मिल्ने कुरै भएन । हामी जनकपुरधामको विकासमा अवरोध पुर्याउन चाहन्नौँ । बढाइएको करलाई लिएर हामीले आन्दोलन शुरु गरेका थियौँ एक महिनाको समय दिइएको छ । छठपछि करलाई लिएर केही निर्णय भएन भने फेरी हामी आन्दोलनमा होमिन्छौँ । जनकपुरधामको विकास जुन रुपमा हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । एडिबी जो पहिलेदेखि नै कार्य भईरहेको थियो त्यसलाई आफ्नो उपलब्धि मेयरले मानिरहेका छन् ।
Tags प्रफुल्लराज घिमिरे बजरंग प्रसाद साह लालकिशोर साह
Previous मैथिली बालकथाः बुद्धियार डाक्टर
Next जे सन्तुष्टि गरिबक सेवा कएलासँ होइत अछि ओतेक कथुसँ नहिः वैद्यनाथ साह, सामाजिक कार्यकर्ता